आजदेखि ४ महिना गुरु ग्रहले बदल्यो घर, यी राशिलाई उल्टो/सुल्टो चाल ! (यी राशि बन्नेछन् मालामाल) - Taja Report
Homeराशिफलआजदेखि ४ महिना गुरु ग्रहले बदल्यो घर, यी राशिलाई उल्टो/सुल्टो चाल ! (यी राशि बन्नेछन् मालामाल)
July 12, 2018 राशिफल Comments Off on आजदेखि ४ महिना गुरु ग्रहले बदल्यो घर, यी राशिलाई उल्टो/सुल्टो चाल ! (यी राशि बन्नेछन् मालामाल)
ज्योतिषशास्त्रमा गुरु ग्रह धर्म, ज्ञान र सुख-समृद्धिको कारण मानिन्छ। गत ४ महिनाको लागि गुरु तुला राशिमा विपरीत चाल चालिरहेको छ । १० जुलाई, रात ११.०० बजे देखि ३२ मिनेट सम्म रात मा तुला राशिमा सकारात्मक चाल चालिरहेको छ । यसरी यो चालबाट छोडेर गुरु अक्टोबर ११ मा बृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्नेछ । यो बिचमा अर्को चार महिनाको लागि गुरुले सिधा चाल चाल्नु ज्योतिषशास्त्रमा राम्रो मानिन्छ । यहाँ हेर्नुहोस् तपाईंको राशिको लागि गुरुको मार्गदर्शन कसरी चल्नेछ ।
मेषः राम्रो अवसरहरू खोज्दै पूर्ण हुनेछ
गुरुको प्रभावले तपाईंको जीवनमा केहि नयाँ सुरुवात हुँदैछ। यसका लागि, तपाईंले आफ्नो पूर्ण ऊर्जा राखेर लक्ष्य प्राप्त गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ भने,निश्चित रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस समयमा नयाँ परियोजनाहरू र कार्य योजनाहरू सफलतापूर्वक पूरा गरिनेछ। अहिले तपाई सावधान रहनु पर्छ र तपाईका नजिकका अवसरहरू पहिचान गर्नु पर्छ ताकि तपाईलाई फाइदा प्राप्त हुन सकोस।
वृषः नयाँ प्रयोगको लागि समय अनुकूल
यदि तपाईं आफ्नो कार्यस्थलको सम्बन्धित सही दृष्टिकोण संग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुहोस् त्यसपछि सफलता निश्चित रूपमा तपाईंको वरिपरी हुनेछ। तपाईं रचनात्मक र आध्यात्मिक कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको प्रसिद्धि बढ्नेछ,यो समय तपाईलाई नयाँ प्रयोगको लागि उत्तम समय हो। वरिष्ठ अधिकारका शब्दहरू ध्यानपूर्वक सुननु तपाँयको लागि लाभदायक हुन्छ । साथै, आउने दिनहरूमा तपाँइ आफुलाई भावनात्मक रूपमा अझ बलियो महसुस गर्छन्।
मिथुनः भविषयको लागि मह्तवपुर्ण निर्णयहरू गर्नेछ
जो व्यक्ति केहि किसिमको शोध क्षेत्र संग सम्बन्धित छन् केहि प्रकार को महत्वपूर्ण खोज को लागि उपलत्तधी प्राप्त गर्न सक्छन्। यस समयमा बनाइएको वित्तीय वार्तालाप र भविष्यका निर्णयहरू विशेष गरी सफल हुनेछन्। यस्तो समयमा, तपाईलाई तपाइँका सबै समस्याहरूको सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नु राम्रो हुने देखिन्छ , अविवाहितहरुका लागि विवाहको प्रस्ताव आउँन सक्छ,जीवनसाथीको भरपुर सहयोग मिलनेछ ।
कर्कटः अनुभवी मान्छे संग राम्रो समय बित्नेछ
आर्थिक स्थितिसँग सम्बन्धित निर्णयहरू लिनको लागि तपाँयको समय अनुकूल छ। सही र भरपर्दो निर्णय गर्ने तपाईंको स्वभावले तपाईंलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक क्षतिबाट बचाउन सक्छ । यदि तपाइँ यस समयमा कुनै पनि प्रकारको अस्थायी र सार्थक निर्णयबाट बचाउनुहुन्छ भने, यो राम्रो हुनेछ। तपाईं पुरानो र विश्वासिलो मित्रहरू वा अनुभवी व्यक्ति संग समय खर्च गर्न पाउँदा खुसी हुनुहुनेछ। उनीहरूको अनुभवबाट तपाईंले धेरै फाइदा पाउनुहुनेछ।
सिहंः आफ्नो विचारहरू स्पष्ट तरिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस्
यस समयमा,तपाईले लिएका केहि प्रमुख निर्णयहरू सफल साबित हुनेछन्, जसले तपाईंलाई पहिले भन्दा बढी आफ्नो विचारमा अधिक स्पष्टता र विश्वास भएको महशृु हुनेछ । भविष्यका निर्णयको बारेमा, तपाइँ भविष्यमा अझ स्पष्ट रुपमा आफ्ना साथीहरू सँग पुग्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाँइको निजी सम्बन्धमा केही ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ। विवाहित जीवनमा खुशीको अनुभव गर्नुहुनेछ ।
कन्याः तपाईंको वास्तविक सम्भावना पहिचान गर्दै
तपाईले सही दिशामा आफ्नो ऊर्जा प्रयोग गर्न सिक्नु पर्छ। त्यसपछि मात्र तपाईं आफ्नो लक्ष्यलाई सफलतापूर्वक पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई सफलतापूर्वक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिले तपाईंलाई आफ्नो असल क्षमताको पहिचान गर्नेछ। व्यक्तिगत जीवनबारे कुरा गर्दा, सन्तुलित हुनु आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र तपाईं जीवनलाई अझ राम्रो सँग समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
तुलाः सबै कामका लागि समय अनुकुल हुनेछ
यो समय तपाईंको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। अब तपाईं निर्णय गर्न सक्नुपर्छ कि तपाईं यो अवसरबाट कसरी लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। यस समयमा तपाईले आफैलाई उत्प्रेरित राख्न आवश्यक छ, अन्यथा तपाईं असहमति र असहमतिको विचमा पर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं द्वारा बनाईएको प्रलोभनले अरुसँग ठूलो बहस गर्न सक्छ। दाम्पत्य जीवन एकदम शुखी रहनेछ । छोराछोरीको भलाइको लागि ठूलो निर्णय गर्न सक्छ।
वृश्चिकः तपाईंले इच्छित लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
यो समय उनिहरुका लागि लाभदायक हुनेछ,जस्ले कुनै व्यवसाय वा आफ्नै काम गर्छन् उनीहरूको प्रयास गर्दा सोचे अनुसारको फल प्राप्त गर्न सक्छन। वर्तमानमा, तपाईंका सहकर्मीहरू र कर्मचारीहरूलाई तपाईंले राम्रोसँग काम गराउन सक्नेछन् । यस कारणले यस समयमा तपाँइ र तपाँइको कम्पनीलाई पूरा फाइदा हुनेछ । खानपानमा ख्याल राख्नुहोस् र स्वास्थ्यको लागि योग गर्नु फाइदाजनक हुनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखत रुपमा चल्नेछ ।
धनुः नयाँ कुरा गर्नको लागि रुचि बढ्नेछ
यस समयमा तपाईंको ऊर्जा सही दिशामा छ, जुन उर्जालाई तपाँइले कुनै पनि नयाँ कामको लागि लगाउन सक्नुहुन्छ । यो समयले तपाईंलाई नयाँ परियोजनाको लागि एक कठिन प्रयास गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। यसबाहेक, क्षेत्रीय कार्यसँग सम्बन्धित कार्य तपाईंको लागि फाइदाजनक साबित हुनेछन। कुनै चीज नयाँ कुरा सिक्नको लागि समय अनुकुल हुनेछ।
मकरः चुनौतीपूर्ण कार्यहरूमा सफलता
यो समय तपाईंको संसारमा धेरै नयाँ र राम्रो परिवर्तनहरू छन्, त्यसैले आफैलाई कुनै पनि दिशामा सीमित नगर्नुहोस्। यस समयमा तपाईं लामो दूरी यात्रा गर्न, नयाँ चीजहरू सिक्न वा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्टमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। राम्रो समय परिवार र साथीहरु संग खर्च हुनेछ। तपाई पुरानो साथी र आफन्तहरु भेट्न पाउँदा खुशी हुनुहुनेछ ।
कुम्भः विरोधीहरूलाई हराउनेछ
कार्यक्षेत्रमा सतर्क रहेर काम गर्दा विपक्षीलाई हराउन र लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईँका विचारहरू र ऊर्जाको सर्वोत्तम प्रयोगसँग खुसी तुल्याएर, तपाईं क्षेत्रमा आफैलाई सकारात्मक सोच सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। व्यक्तिगत जीवन सुचारु रूपमा प्रगतिशील बन्नेछ । पुरानो सम्बन्धमा सुधारबाट तपाँयको मन खुसी हुनेछ। भविष्यमा योजनाहरू सिर्जना गर्न सफल हुनेछन जसले तपाईंको जीवनमा सकारात्मक असर हुन सक्छ।
मीनः सबैसँग राम्रो सम्पर्क कायम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ
भविष्य सँग सम्बन्धीत प्रतिस्पर्धाको कारण, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। नयाँ प्रयोगहरूमा अनुकूल समय छ, धेरै व्यक्तिले आर्थिक लाभ पनि प्राप्त गर्नेछन । पारिवारिक जीवन राम्रो रहनेछ , अविवाहित व्यक्तिहरूसँग राम्रो विवाहको प्रसताव आउँन सक्छ। विवाहको राम्रो स्थिति रहनेछ,थुप्रै व्यक्तिहरूको सोचेको काममा सफलता मिल्ने देखिन्छ ।